Sweden oo laga yaabo in ay fududeyso sharciga badalaada magacyada | Somaliska
Sweden oo laga yaabo in ay fududeyso sharciga badalaada magacyada
Gudi ay dowlada Sweden u xilsaartay in ay baaritaan ku sameeyaan sida loo fududeyn karo sharciyada la xiriira badalaada magaca ayaa soo bandhigay qorshahooda kaasoo lagu muujiyay in aad loo fududeeyo sharciyada la xiriira in dadku magaca iska abdali karaan.
Qorshaha oo loo soo bandhigay wasiirka cadaalada Sweden Beatrice Ask ayaa lagu soo bandhigay in la fududeeyo in qofka uu magaca iska badali karo inta uu doono isla markaana uu qaadan karo labo magac oo dambe. Dadka ayaa xoriyad loo siinayaa in ay magac kasta qaadan karaan haddii ay ugu yaraan 2000 qof ay magacaas horay u isticmaalaan. Dadka ayaa sidoo kale xoriyad loo siinayaa in ay yeeshaan labo magac oo dambe (efternamn).
Wasiirka cadaalada ayaa soo dhaweysay qorshahaan. Haddii ay dowlada Sweden go’aansato in ay hirgaliso sharcigaan ayuu u noqonayaa fursad weyn dadka doonaya in ay iska badalaan magacooda, qaasatan Soomaali badan oo wadankaan ku jooga magacyo aysan lahayn.
Gudiga ayaa dhinaca kale soo bandhigay in dadka aan loo ogolaan in ay iska qaataan magaca kasta oo ay doonaan, magacyada qaaska ah ee ay leeyihiin familada taariikhda muhiimka ku ah ayaan la ogolaan doonin in qofkasta iska qaato. Sidoo kale waalidiinta ayaa la doonayaa in ay caruurtooda u bixiyaan magacyo aysan dhibaato kala kulmayn mustaqbalka.
Sidee u aragtaa qorshahaan? Ma iska badalaysaa magaca aad hada ku joogto Sweden? Ku darso fikradaada…
Qilaafaadka diimaha oo ku soo kordhaya Sweden
Waa fikir aad u wanaagsan laakiin anigu magacaygii runta ahaa baan ku joogaa
Asc wax qiimo weyn oo ay leedahay malahan in qofka iska bedelo magaciisa amaba kan familkiisa marka aniga wax muhiimad ah iima lahan asc
Asc dhamaan uma somaliyeed qorshahaan waa mid horay u jiray awal maahan mid cusub waayo 3magac waa la abadali jiray awalba aniga ayaa arkay dad horay isaga badalay magaca 2 hore waa free lkn kan 3aad ayaa ahaa lacag tusaale magaca qofka iyo kan aabaha waa free bilaa lacag ayaa laguu badalaa hadii aad rabto inaad kna sadaxad badalado waa lacag marka waa sidaas inta og waa ogeed inta aan ogeen waa muhiim inuu somaliska u sheego lkn waxa dad aad u daneenayaan waa badalida dhanka sanadka ama da,da taasna waa la diidanyahay
hibaaq ciise says:
asc somali oo dhan walaheyga and jimcaale yaa warka haayo arimahaan la shegayo maka mid yihiin dadka aan caruurta isku dhalin
ASC,WALAALAHA SOOMALIDA AH MEEL KASTA OO AY JOOGAAN.WALAALAYAAL DADKA AAN LA HADLAYO WAA DADKA JOOGA SWEDEN EE KU JOOGA MAGACYO AYSAN LAHAYN IYO MAGACYO AABEYAAL KALE OON AHAYN KUWII SAXDA AHAA EE DHALAY,FADLAN WAA FURSAD EE SAXA MAGACYADA AABAYAASHIIN SI AAD ADUUN IYO AAKHIRABA U LIIBAANTAAN.ASC
May 30, 2013 at 00:21
Magacayga Waa MOHAMED waana magaca ugu sharafta badan aduunka. waan soo dhawaynayaa qofkii doonaya in uu baxsado magaca MOHAMED sami ayaa noqonaynaa sxb ! welcome
May 31, 2013 at 12:42
asc walaalayaal waxaan idin weeydiiyay qofki magaciisa runtawato,laakiinn abaaha usan ahayn magaca aabaha miyuu badaln karaa kan aabaha iyo awoowga. qofkii wax faafaahin ah kahayo fadlan iisoo gudbiya idinkoo mahadsan.
May 31, 2013 at 13:15
mafiicna inaad soo qaadato magaca soomaalida mahadsanid
fariid cadde says:
June 1, 2013 at 15:45
sxb abdi yar arinta magac badalka haddi aad war baxin ka hayso waddada lo maro fadlan ila so xariri si aad war baxin iga caawiso emailka fc cadde Haji iga la so xarir facbookayga
June 5, 2013 at 03:08
Wax qiimo ma lahan magac la badalayo